လန်ဒန်မြို့ကနေ နံမယ်ကျော်စာရေးဆရာShakespeare ရှိတ်စပီယား မွေးဖွားရာဇာတိStratford-Upon-Avon သို့ – XV | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » လန်ဒန်မြို့ကနေ နံမယ်ကျော်စာရေးဆရာShakespeare ရှိတ်စပီယား မွေးဖွားရာဇာတိStratford-Upon-Avon သို့ – XV
လန်ဒန်မြို့ကနေ နံမယ်ကျော်စာရေးဆရာShakespeare ရှိတ်စပီယား မွေးဖွားရာဇာတိStratford-Upon-Avon သို့ – XV
Posted by Kyaemon on Nov 12, 2012 in Arts & Humanities, Education, Literature/Books, Photography, Society & Lifestyle, Travel |9comments
London Stratford Upon Avon William Shakespeare
ဆက်လက်ပြီး ကမ်ဘာကျော်စာရေးဆရာWilliam Shakespeare ရှိတ်စပီယား မွေးဖွားရာဇာတိStratford Upon Avonသို့သွားလေ့လာရအောင်၊
Shakespeare’s Birthplace | Flickr – Photo Sharing!
The half-timbered house where William Shakespeare was born in 1564 is Stratford’s most cherished historic place. It is the most frequently visited of all the tourist places. Descendants of the dramatist lived there until the nineteenth century, and it has beenaplace of pilgrimage for over 250 years.
Open daily, tours start in The Birthplace which contains an acclaimed exhibition of the poet’s life, William Shakespeare: His Life and Background They then carry on through the house, which is furnished in period style with many historic manuscripts and books. Finally the tour ends outside in the celebration garden. Stratford Upon Avon 008
Stratford Upon Avon 023 | Flickr – Photo Sharing!
Holy Trinity သင်းချိုင်းဂူကShakespeareရဲ့ပုံ
No Sweat Shakespeare ‘s conclusion is that we should stick with the Droeshout engraving forageneral idea of Shakespeare’s appearance, and go to Stratford, and visit the Holy Trinity Church foratrue impression of what Shakespeare looked like shortly before his death.
William Shakespeare Biography – Facts, Birthday, Life Story – Biography.com
William Shakespeare was baptized April 26, 1564, in Stratford-upon-Avon, England. From roughly 1594 onward he was an important member of the Lord Chamberlain’s Men company of theatrical players. Written records give little indication of the way in which Shakespeare’s professional life molded his artistry. All that can be deduced is that over the course of 20 years, Shakespeare wrote plays that capture the complete range of human emotion and conflict…
အမေရိကန် ချီကာဂိုမြို့ Lincoln Parkပန်းခြံကShakespeare အားဂုဏ်ပြုတဲ့ ပန်းပုရုပ်ပုံ
Lincoln Park, Chicago Wm Shakespeare Statue
ရှိတ်စပီယား က ၁၅၆၄ ခု ဧပြီလ ၂၆ မှာမွေးဖွားပြီး ၁၆၁၆ ခု ဧပြီလ ၂၃ မှာကွယ်လွန် တာ (အသက် ၅၂ နှစ်)၊
သူ့ကို National Poet အင်ဂလန် နိုင်ငံတော်အမျိုးသား ကဗျာဆရာကြီး Avon ကBard တေးသံရှင်အဆိုတော်ကြီးလို့လဲ အ မည်တပ်တာ၊
ပြဇာတ် ၃၈ ခု၊ Sonnet ကဗျာ ၁၅၄ ပုဒ် ရေးခဲ့ပြီး
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာAnne Hathawayနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေး ၃ ဦးထွန်းကားခဲ့တာ၊ ၁၅၈၅ နဲ့ ၁၅၉၂ အကြားမှာ သူကလန်ဒန်မြို့မှာ စာရေးဆရာ၊သရုပ်ပြမင်းသားနဲ့ပြဇာတ်အဖွဲ့
Stratford Upon Avon –aset on Flickr
Stratford-upon-Avon –aset on Flickr
Search results for shakespeare birthplace
Flickr: Search ell brown’s photostream
Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon – Shakespeare’s Grave – graves of Anne and William Shakespeare | Flickr – Photo Sharing!
၂၀၁၀ တုန်းက ဂူဝင်ကြည့်တာတောင် အင်ဂလိပ် ပေါင်စတာလင် ငွေ ၁.၅၀ ( $ ၂.၃၈ )(ကျပ် ၂၀၃၄) ပေးရတာ
Stratford Upon Avonရဲ့တည်နေရာ နဲ့လန်ဒန်အကွာအဝေး အနေအထား(၇၈ မိုင်ဝေးတာ)
Stratford-upon-Avon, United Kingdom – Google Maps
Lambs’ Tales From Shakespeare – Preface
Canon Top Top
DEEP (Database of Early English Playbooks) isasearchable database “…of Early English Playbooks allows scholars and students to investigate the publishing, printing, and marketing of English Renaissance drama…”
The Canon. A chronological listing of the poems and plays. This is an area that will be developing to include materials on dating the works.
The Classic Text: Traditions & Interpretations. An exhibit of certain Shakespearean texts withadiscussion of the textual tradition from the University of Wisconsin-Milwaukee.
The Shakespeare Database Project.
A Shakespeare Dictionary by Stephen Sherman. “…an extremely selective and personal dictionary.”
Hartmut Ilsemann. Statistics of plays by William Shakespeare. An heroic effort. Frequency distributions can be found for each play using the site’s menu system.
Wonderful, brief introductions with synopses of each of the plays can be found at the Folger Shakespeare Library site.
An original, illustrated html edition of the complete Tales From Shakespeare, by Charles and Mary Lamb. If you are unfamiliar with the tales, they were originally published in 1806 (dated 1807) and are prose renderings for children of 20 of the plays. The tragedies were written by Charles and all the others by Mary Lamb. Though originally intended for children, they are revered works in their own right and serve as wonderful introductions to the plays. In their table of contents they are given in their originally published order, and below are given in alphabetical order:
The standard HTML Complete Works sites are:
in the USA, the MIT Shakespeare Homepage. The Complete Works from the Tech. HTML editions of the works are laid out nicely in table format.
in Australia, Matty Farrow’s the Complete Works site, withagood glossary and an excellent search engine.
[These, and almost all the Complete Works sites on the Internet are based onavery generic text released to the public domain in the early 90’s called the “Complete Moby™ Shakespeare,” based initially, it is believed, on The Stratford Town modern spelling edition of 1911 (see the bibliographic entry for the MIT site from SHINE). Where the works are based on another text, it is noted below.]
Other notable HTML and text Complete Works sites:
Open Source Shakespeare – concordance, keyword and advanced searching, statistics, the text of the plays, find characters, andasearch of all the poetry as well. Remarkable. Based on the Globe edition.
The Works in HTML editions from Wikisource, without version attribution.
PlayShakespeare.com, “the ultimate free Shakespeare resource,” primarilyapresentation of the texts with some ancillary materials. “All of the texts on this site come from the First Folio of 1623 (and Quartos where applicable) and the Globe Edition of 1866 and have been re-edited and updated.”
Renascence Editions of the Complete Works in PDF and HTML versions, University of Oregon.
The Complete Works from the etext library at the University of Adelaide.
The source for the Project Gutenberg texts of the Complete Works, and the Gutenberg listing of doubtful and spurious works. Project Gutenberg also mountsaComplete Works interface at this location.
A no-frills, well designed portal to standard html versions of the complete works (the thirty-seven canonical plays, not Two Noble Kinsmen), withabrief biography on the index page, and the ability to search within any of the individual works or across all, from ReadPrint.com.
Another HTML edition of the Complete Works mounted by the Pasadena Shakespeare Company. Notes and other introductory materials are not provided.
The Complete Literary Works of William Shakespeare from The Classic Literature Library…..
William Shakespeare – Complete Works of Shakespeare, Biography, Study Guides
Tales From Shakespeare (For Children)
ရန်ပိုင်| November 8, 2012 | ဧရာဝတီဘလော့၈်
တရုတ်ပြည်မှ ကြက်သားပေါက်၊ ကြက်ဥ၊ ကြက်သား နှင့် နို့မှုန့်များ တရားမ၀င် တင်သွင်းနေမှုကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူများအနေဖြင့် တားဆီးပေးရန် မန္တလေးတိုင်း မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက ယမန်နေ့က တောင်းဆိုလိုက်သည်။
တရားမ၀င် တင်သွင်းမှုကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ အသားစားနှင့် ဥစားကြက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်သည့်အပြင် ကြက်သား ဈေးကွက်တွင်လည်း ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ စားသောက်ကုန် စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်းမရှိဘဲ တင်သွင်းခြင်းကြောင့် ကျန်း မာရေး ကဏ္ဍတွင် ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဒု က္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ကျော်ထင်က ပြော သည်။
“ဒီလိုမှောင်ခိုသွင်းတာက အအေးခန်းရှိတဲ့လူတွေ အများဆုံးလုပ်တယ်၊ သူတို့ကတရုတ်ပြည်ကို ပင်လယ်စာ ပို့တယ်၊ အပြန်မှာ ကြက် သား တင်လာတယ်၊ တကယ်တော့ ဒါတွေက ပိတ်ပင်ထားတဲ့ကုန်တွေ၊ သွင်းခွင့်မရှိဘူး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မှောင်ခိုသယ်ယူလာသည့် ကြက်သားများကို မန္တလေးနှင့် အထက်မြန်မာပြည်မြို့ကြီးများတွင် ပြန်လည် ရောင်းချ ကြောင်း၊ ထိုအ သား များမှာ အအေးခန်းများအတွင်း ရက်ကြာကြာထား၍ သိုလှောင်သည့်အတွက် လတ်ဆတ်မှုမရှိသည့်အပြင် ကြက်ငှက်တုတ် ကွေး ရောဂါများလည်း စိုးရိမ်ရကြောင်း ဒေါက်တာ ကျော်ထင် က ဆက်ပြောသည်။
ယခင် တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများ ထားရှိသည့်အတွက် တင်သွင်းမှုနည်းပါး သော် လည်း ယခုအခါ လွတ်လပ်သည့် အာဆီယံ ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒအရ အဆိုပါ စခန်းများ ရုပ်သိမ်းသွားသည့် နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းကြက် သား ဈေးကွက်တွင် ထိုသို့သော အေးခဲအသားများ ပိုမို ၀င်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
မန္တလေးမြို့ခံ ကြက်မွေးမြူရေးသမားတဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ နေသူရိန် ကလည်း“ကြက်ဥဈေးက ကျတယ်၊ အစာဈေးက တက် တယ်၊ အဲဒီကြားထဲမှာ တရုတ်ပြည်ကနေ ဒီလိုတွေထပ်ဝင်တော့ ပြည်တွင်းမွေးမြူရေးသမားက မလွယ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်အရေးယူဖို့ ဖိအား ပေးတာ”ဟု ပြောဆိုသည်။
ထိုသို့ တရုတ်နယ်စပ်မှ တရားမ၀င် ကုန်ပစ္စည်းများ ၀င်ရောက်နေခြင်းကို တားဆီးရန် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနသည် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၊ ရဲ တပ်ဖွဲ့၊ ဒေသ အာဏာပိုင်များသာမက ကုန်သည် များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်ဒေသ ကုန်သည်ကြီးများ အသင်း၊ သတင်းမီဒီယာ သမားများ ပါဝင် သည့် နယ်လှည့် စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ မူဆယ်-မန္တလေး ကားလမ်းပေါ်တွင် စစ်ဆေး မှုများ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဤကဲ့သို့ တရားမ၀င် ကြက်သားပေါက်၊ ကြက်ဥ၊ ကြက်သားနှင့် နို့မှုန့်များ ၀င်ရောက်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ရှိမရှိ အဆိုပါ နယ်လှည့်စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သို့ ဧရာဝတီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။
PDF ဖိုင်လေးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ။ တချို့စာတွေ ဘာသာပြန်လောက်ပဲ ဖတ်ဖူးတာ ။ ခုမှ ပဲ တွေ့တော့တယ် ။
kyaemon တင်တဲ့ ပိုစ်တွေမှာ ဗဟုသုတရစေမယ့်ပုံတွေပါနေကျမို့ 
ကျနော် အမြဲဝင်ကြည့် တယ်။
(၂၀၀၄)တုံးကညီလုပ်သူက Shakespeare’s Birthplace ဆိုပြီး Strafford-upon-Avon ကိုခေါ်လာတော့ ကြီးကြီးကျယ်ခန်းခန်းနား ပြကွက်တွေမြင်ရမယ်ထင်ပေမဲ့ ရိုးရိုးစင်းစင်း ပြကွက်တွေသာမြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Shakespeare ရဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ငယ်စဉ်ဘ၀ကိုမြင်ရတော့၊ မြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသတ၀ိုက်ကနေ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ပညာရှင်တွေလည်းဒီလို အခြေခံကျတဲ့လူတန်းစားတွေက ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြတာပါကလားဆိုတာ သွားတွေးမိပါတယ်။
ကို maungmoenyo ရေ ။
” တောထဲက ဆူးတွေကို ဘယ်သူမှ ချွန်မပေးရဘူး ” တဲ့ ။
” Shakespeare ရဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ငယ်စဉ်ဘ၀ ”
ပုံအရတော့ သိပ်ဆင်းရဲပုံတော့မရဘူး ။
တိုက်နှင့် နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ ။
ကို Kyaemon ရေ ။
အခုလို အတော်ကို အားထုတ်ထားမှန်း သိသာတဲ့ Post အတွက် ၊
စေတနာကို ကျေးဇူးတင်ပါရစေ ။
ဆည် ( Dam ) အကြောင်းတွေလည်း ဆက်ရေးပါအုံးဗျ ။
ဗဟုသုတ ရတာပေါ့ ။
လေးလေးနက်နက် တွေးတောစဉ်းစားချင့်ချိန် နိုင်မဲ့ဟာတွေ ကို